Demon Blade oo leh sumadda Barcelona oo layaab leh samurai RPG | Androidsis
Demon Blade wuxuu ku sugnaa Play Store mudo ka badan sanad waxaana waqtigaan oo dhan ay awood u yeelatay inay kasbato kumanaan ciyaartoy Waxay heleen sharad asal ah sida RPG oo kale. Ciyaar ay tilmaamadeenu noo oggolaan doonaan inaan isticmaalno seefteenna oo aan u abuurno dhaawac cadowga, sida ay tahay inaan u feejignaano difaaceena si aan u xakameyno dhaqdhaqaaqa cadowga.
Un ciyaarta sifiican loogu qaabeeyey heer muuqaal ah waana shaki la’aan hawo nadiif ah loogu talagalay ciyaar ka moobilka. Waxaan u leenahay hal abuurkiisa halganka ee dagaalka, maadaama aan hayno bar ay tahay in la buuxiyo si aan ugu soo bandhigno dhabar jabkeena saxda ah ee cadawga. U tag.
1 Adkaysiga iyo dadaalku waxay leeyihiin ajarkooda
2 Baadh barxadaha ku yaal RPG Demon Blade
3 Lagu sameeyay Spain (Barcelona)
Adkaysiga iyo dadaalku waxay leeyihiin ajarkooda
Demon Blade waa ficil cusub oo RPG ah oo ay horumariyayaashu waxay sameeyeen dadaal ku filan si ay u helaan kumanaan dib u eegis ah aad u wanaagsan. Ciyaar muujisa taas oo ay ku jirto mime iyo taas oo laga dareemo daqiiqadda ugu horreysa ee qofku ciyaaro ciyaar.
Gameplay asalka ah oo ku saleysan tilmaamo kala duwan oo lagu sameeyo dhaqdhaqaaqyo weerar oo kala duwan seefteenna samuurayda, iyo mid kale oo fudud oo taabasho ah oo isku dayi doonta in laga hortago dhabar jabinta cadawga. Halkan waa inaan siino feejignaanta lagama maarmaanka u ah dhaqdhaqaaqa iyo animation-ka cadawga si loo riixo shaashadda waqtiga saxda ah.
Waana inaan awoodno, haddii aan karti ku filan u leenahay, ee xitaa soo noqo isla waqtigaas aan xannibno ku dhufo cadowga si aad u geysato dhaawac weyn. Waxaan sidoo kale jeclaanay habka loo dhigayo dhaqdhaqaaqa jilaayaasha iyada oo loo marayo qolalka lagu maro oo aan si fudud ugu dhaqaaqi karno.
Baadh barxadaha ku yaal RPG Demon Blade
Demon Blade wuxuu kuu ogolaanayaa inaad riixdo qolalka aan ku leenahay khariidada si loo ogaado waxa aan ku jirno mid kasta. Taasi waa, waxaan leenahay seddex meelood meel aragtida ah samuuraydeena taas oo jawiga laga dheehan karo waxaanan leenahay cadaw kala duwan oo ah madaxdii ugu dambeysay, iyo sidoo kale laabta, aragtidayada.
Haddii aan riixno dhinaca hoose ee shaashadda, khariidadda heerka ayaa u muuqan doonta inaad gujineyso mid kasta oo ka mid ah qolalka iyo wixii la mid ah sii wad sahaminta ilaa aan ka helno dhamaadka ka mid ah.
Waxaan sidoo kale heysanaa koox aan ku horumarin karno adoo soo dhejinaya jinniyo kala duwan Taasi waxay bixin doontaa dhammaan noocyada waxyeellada sida aasaasiga. Maaddaama ay sidoo kale tahay RPG, waxaa ka mid ah hagaajinta qalabka, kor u qaadista iyo abaalmarinta iyo bililiqeynta xabadka si loogu raaxeysto seefo cusub oo noo oggolaaneysa inaan si sax ah u horumarinno.
Lagu sameeyay Spain (Barcelona)
Faahfaahin kale oo muhiim ah ayaa ah inay ku qoran tahay Isbaanish, iyo ayaa ah in kooxda horumarka ay ka timid Barcelona, si aan u ogaan karno sheekada asalka ah inaan isku dhex galno sidaasna aan ku noqon karno khibrad ciyaar deeqsi ah. Maaddaama ay bixiso multiplayer khadka tooska ah leh hoggaamiyeyaal, guilds aan ku biiri karno iyo ciyaaraha PvP oo aan kula tartami doonno ciyaartoy kale. Si kale haddii loo dhigo, waxay leedahay wax kasta oo aan u baahan nahay si aan uga dhigno ciyaarteenna ugu xiisaha badan. Haddii aan ku darno tan inay cusbooneysiinayaan wax kasta oo yar oo leh waxyaabo cusub, waxaan leenahay ciyaar sanado ah.
Muuqaal ahaan sidoo kale runtii waan ka helnay qaab muuqaalkeeda u gaarka ah taas oo aan loo baahnayn midabyo dhalaalaya, laakiin taasi waxay leedahay muuqaal cabsi leh oo ku saabsan qaababka soo rogaya shaabaddeeda tayada leh; Tani waa muhiim inaad awood u yeelatid inaad kala soocdo dadka kale. Dareenkaan, waxay leedahay wax walba oo u socda si ay u noqoto ciyaar caan ah. Waxa kale oo ay leedahay sawirro iyo jilayaal aad loo qaabeeyey; maya ma seegi doono midkoodna ammaanta Da'da Samurais.
Demon Blade waa layaab fiican sida ciyaarta RPG dagaalka oo leh tilmaamno taas oo ah inaynu u digtoonaanno markaynu weerarno iyo inaynu is-difaacno. Waxaad ku haysataa bilaash si aad uga qaybqaadato bulshada ciyaartoy soo koraya iyo sharad ku saabsan warshadaha ciyaarta fiidiyowga ee u baahan taageero dheeri ah halkan dalkeenna.
Kufiican fikradeeda oo leh sawiro aad u fiican iyo qaabkeeda u gaarka ah ee lagu fahmayo ciyaarta dagaalka samurai. Si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo horumariyayaashu waxay siinayaan daryeel ku filan si ay uga sii weynaadaan.
Fikradiisa ku aadan weerarka iyo ka difaacida cadowga
Jaantus ahaan waxay leedahay shaabad tayo leh
Sheekada iyo inay ku jirto Isbaanish
Hubka noocyadiisa kala duwan iyo awooda lagu casriyeeyo waxyaabaha aasaasiga u ah
Iyadoo aan horay loo ogaan
Blade Blade - Samurai RPG
Developer: Garage51 Madadaalo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Sharad asal ah oo ku saabsan dagaalka samurai ee lala leeyahay Demon Blade, RPG oo leh shaabad Barcelona ah